Xperia 1 II နဲ့ Xperia 10 II ဖုန်းတွေမှာ ဘာထူးခြားနေလဲ
Xperia 1 II? Xperia 10 II? နာမည်က အဆန်းလေးတွေ၊ ကျနော်တို့ Sony ဖုန်းသစ်အကြောင်း မပြောခင်မှာ ခေတ်ရေစီးကြောင်း ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင် အရည်သွေးကောင်းပြီး ပေးရတဲ့စျေးနဲ့ ထိုက်တန်ရင် ကြိုက်ကျတယ်။ ဒါပထမဆုံး အချက်လို့ ပြောနိုင်တယ်
ဒီလိုမဟုတ်ဘူး ဆိုရင်လည်း နည်းပညာတစ်ခုခု ဥပမာ ကင်မရာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် ပိုမိုက်လာတာ နောက်တမျိုးပြောရင် မော်ဒယ်ဟောင်းကိုပဲ ထပ်မြင့်မယ်၊ အဲ့လိုသွားမယ်ဆိုရင် Fans တွေ စကားနားထောင်ပြီး ဖြည့်စွက်ပေးတာမျိုး သဘောခွေ့ကျတာပါ။
အခုလို ခေါင်းစီးချည်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန် Sony ဘာတွေ ဆန်းသစ်ထားပြီလဲ? Xperia ဖုန်းတွေဟာ အရည်သွေးကောင်းတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်နေတယ်လို့ စာဖတ်သူတွေ သိထားပြီးတဲ့အတိုင်း 2020 Sony ဖုန်းတွေက ဘာထူးခြားသွားပြီလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Xperia 1 II (Not One Two)
သေချာပါတယ်!! 2020 Xperia ဖုန်းတွေကို ဝမ်းတူး၊ တန်းတူးလို့ ဖတ်ကြမှာပါ။ တကယ်တော့ အဲ့လို့မခေါ်ပါဘူး၊ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ရောမဂဏန်း တွဲထားပေမယ့် Xperia 1 Mark II ၊ 10 Mark II လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နာမည်ပေးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ iPhone တုန်းကလို XR ၊ XS ကွဲထွက်သွားသလို ရှေ့ဂဏန်းက မော်ဒယ်ဟောင်းကို ရည်ညွန်းတယ်၊ နောက်မှာ ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ အက္ခရာ ၊ ဂဏန်းက Generation Improve ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ဒီလိုပဲ Sony ဖုန်းတွေမှာလည်း ၂၀၁၉ မော်ဒယ်နဲ့ ကွဲမခြားနာ ပြောစရာလေးတွေ ရှိထားပေမယ့် Whatever! 2020 မော်ဒယ်တွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အရင်ဆုံး Display ပိုင်းက စပြောကြတာပေါ့။
Still with Gorgeous Display
4K OLED HDR ဆိုတာ Sony မှန်းသိစေတဲ့ အချက်လို့ ပြောနိုင်သလို လက်ရှိ Mobile Display မှာ အရည်သွေး အကောင်းဆုံးလို့ ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 6.5″ အရွယ် မျက်နှာပြင်ထဲမှာ Pixel တွေ ပြွတ်သိပ်ထည့်ထားပြီး 4K လုပ်လိုက်တာက ပထမအချက် Sony အားသာချက် ဖြစ်နေတယ်။
Samsung ထက် အကောင်းဆုံး OLED Display ထုတ်ချင်ထုတ်မယ်၊ ဒါမယ့် Xperia Exclusive ပဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မရောင်းသလို Gimmick လို့ ဘယ်သူတွေပြောပြော လှပညက်ညောပြီး အရောင်သွေးစုံလင်တဲ့ 4K OLED ကို သူ့ Device တွေမှာပဲ သုံးတဲ့ အထာနဲ့ တမျိုးတဖုံ ကြွားလုံးထုတ်နေတာပါ။
One Mark II မှာလည်း 21:9 Aspect Ratio နဲ့ ရှည်လမြော Display အသုံးပြုထားပြီး Entertainment အတွက် အသားပေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် စဥ်းစားစရာ ဖြစ်နေတာက Motion Blur လျှော့လိုက်တာနဲ့ 90Hz Refresh Rate သုံးသလို ခံစားရမယ်လို့ ပြောတဲ့အချက်က ဘဝင်မကျစရာ။
ဂရပ်ဖစ်ပိုင်း နားလည်သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင် Sony ပြောသွားတဲ့ အချက်ကို လက်ခံတယ်။ ဒါမယ့် 60Hz နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့ Display Panel က ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ GPU က နောက်ကနေ 90Hz ၊ 120Hz တွန်းနေတယ်ပြောပြော 60Hz က 60Hz ပါပဲ။ ဒါကျနော့်အမြင်ကို ပြောကြည့်တာပါ။ Xperia 1 II မှာ ဘာ Punch-hole ၊ Notch မသုံးမထားတဲ့ အချက်ကလည်း ဘဝင်ကျစရာ။
Lots of Camera Functionality
ကျနော့်ရဲ့ Personal အမြင်ရ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Cinematography ရိုက်နိုင်တဲ့ဖုန်းလို့ တင်စားချင်တယ်။ ဒီနေရာမှာ Sony ပြောသွားတာ ၂ ချက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Burst Mode နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင် 20fps နဲ့ရမယ်၊ နောက်တချက်က Auto Focus နဲ့ Auto Exposure Time မှာ ၁ စက္ကန့်မှာ အကြိမ်ရေ ၆၀ နှုန်းတွက်ချက်ပေးနိုင်တာပါ။
ကျန်တဲ့ ထူးခြားချက်တွေကတော့ Eye-tracking Focus က အခုတစ်ခါမှာ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပါ သုံးနိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ Camera ရဲ့ Autofocus က ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပိုကြီးလာတဲ့အတွက် ကျေနပ်စရာ ကောင်းတဲ့အချက်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
Edit ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း Alpha Camera တွေမှာလို Photo Pro App ကို အသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပြီး The Verge အဆိုရ စမတ်ဖုန်း Photography နဲ့ ပတ်သက်လို့ Manual Function ပိုကောင်းလာမယ်၊ ပြောရင်တော့ Sony Camera တွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Interface ပုံစံအတိုင်း Xperia 1 II မှာလည်း ပိုပြည့်စုံလာတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ကလိနိုင်မှာပါ။
But still with 12MP Lens
ဒါဆိုရင် Lens တွေအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ဆက်ပြောကြတာပေါ့။ 1 II မှာ 12MP Lens ၃ လုံး အသုံးပြုထားပြီး အရင်နှစ် Xperia 1 လို အလယ်မှာ ဒေါင်လိုက်အနေထားနဲ့ ထွက်လာတာမဟုတ်ဘဲ ဘယ်ဘက်မှာ နေရာယူလာတယ်။
အရွယ်စား ပိုကြီးလာသလို 24mm (f/1.7) ရှိတဲ့ Main Camera မှာ 1/1.7″ Sensor သုံးထားပါတယ်။ Galaxy S20 Ultra နဲ့ ယှဥ်လိုက်ရင် Megapixel နဲ့ Sensor Size (1/1.76″) ကွာသွားသလို S20 ၊ S20+ မှာ သုံးထားတဲ့ 12MP Lens နဲ့ တည့်ပြောရင်တော့ အတူတူလောက်ပဲ သွားကြမယ်။
with ToF (Image: Sony)
လက်ရှိ အနေထားတိုင်းဆိုရင်တော့ ကင်မရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြောဖို့အချိန်မတန်သေးသလို ကျန်တဲ့ Lens ၂ လုံးက 16mm Ultra-wide (f/2.2) နဲ့ 70mm (f/2.4) Tele တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Selfie အတွက်ကိုတော့ 8MP Sensor တပ်ပေးထားပြီး 1 II မှာ ကင်မရာ ခလုတ်တစ်ခု သီးသန့်ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Now with ZEISS
မိတ်ဆက်တုန်းက Sony တဖွဲ့တနွဲ့ ပြောသွားတာက Camera System အသစ်ကို ZEISS Calibrate လုပ်ထားတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အများသောအားဖြင့် Professional Camera တွေမှာပဲ အသုံးများတယ်ဆိုပေမယ့် Xperia ဖုန်းအတွက် သီးသန့် Tuning လုပ်ထားတယ် ဆိုရမယ်ပေါ့။
ဗီဒီယိုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ Xperia 1 II ဟာ 8K ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား Audio Recording မှာ Noise တွေကို လျှော့ချမယ့် Function ပါဝင်လာတာကြောင့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 360 Reality Audio Decoding ပါဝင်လာတဲ့ဖုန်းလို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသေးတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ Snapdragon 865 SoC ၊ 8GB RAM နဲ့ 256GB UFS Storage သုံးထားပါတယ်။ US မှာတော့ 4G Only ပဲ ရောင်းချသွားမယ်လို့ ကြေညာထားပေမယ့် ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ 5G ထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ပြီး Sub6GHz ကွန်ရက်တွေကိုလည်း ထောက်ပံ့သွားမယ် ဆိုပါတယ်။
ကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကတော့ Xperia 1 II မှာ 4,000 mAh Battery သုံးထားမှာဖြစ်ပြီး Wireless Charging ပါလာမယ်၊ 3.5mm Headphone Jack Port လည်း ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် လက်ရှိ Flagship ဖုန်းတွေထဲမှာ နှစ်လိုစရာတချို့ Sony ဆီမှာ ကျန်နေပါသေးတယ်။
IP65 နဲ့ 68 Rating ရှိတာက Xperia ထုံးစံတစ်ခုဆိုတော့ အထွေထူးတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ အားမလို ၊ အားမရ ဖြစ်စေတာက Under-display Fingerprint Scanner မသုံးသေးဘဲ Side-mounted Sensor ကို သုံးနေဆဲပါ But it’s still OK!!
What’s new with Xperia Pro
ဒါကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ Concept တစ်ခုအနေနဲ့ပဲ ချပြထားပါသေးတယ်။ Mirrorless DSLR အတွက် အကောင်းဆုံး Solution လို့ပြောနိုင်တဲ့ Xperia Pro မှာ Broadcasting အတွက် 5G Antenna ၄ ခု ပါမယ်။ Alpha Camera တွေကို HDMI ကနေတဆင့် Xperia 1 II နဲ့ တိူက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီး Viewfinder အနေနဲ့ သုံးနိုင်မယ်။
မိတ်ဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Antenna (4-way 5G mmWave) Arrangement ကနေ 5Gbps နဲ့အထက် မြန်နှုန်းနဲ့ Brocast လုပ်နိုင်မယ်လို့ သီအိုရီအရ Sony ပြောသွားခဲ့တယ်။ Instant App အသုံးပြုဖို့ Customize လုပ်နိုင်တဲ့ Shortcut Key ပါလာမယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေက mmWave နည်းပညာသုံးထားတာ မကြိုက်ပေမယ့် အားကျစရာ Integration လို့ပြောရမှာပါ။
အလံတင် သင်္ဘော ၂ စင်း (Flagship) ပြောသွားပြီဆိုတော့ Secondary ဖုန်းအနေနဲ့ ဒါမှမဟုတ် Mid-range တန်းမှာ ရွေးချယ်စရာ Xperia 10 Mark II နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။
Xperia 10 II (Image: Sony Asia)
Specification ကိုပဲ Highlight လုပ်ရရင် 10 II မှာ 6″ OLED Display with 21:9 CinemaWide Full HD+ Resolution ၊ Snapdragon 665 SoC ၊ 4GB RAM ၊ 128GB Storage ၊ Triple Camera – 12MP (Main with PDAF) ၊ 8MP (Ultra-wide) ၊ 8MP (2x Tele) ၊ 8MP Selfie Camera ၊ 3,600 mAh Battery ပါဝင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
But with no Wireless Charging
ဒီအချက်တွေထက် နှစ်သက်စရာလို့ ပြောနိုင်တာ Battery သက်တမ်း တာရှည်ခံဖို့ Xperia Adaptive Charging နည်းပညာသုံးထားတယ်။ IP65/68 Rating ရှိထားသလို အရှေ့၊ အနောက် ကိုယ်ထည် ၂ ခုလုံးကို Gorilla Glass6နဲ့ Cover လုပ်ထားပါတယ်။
Image: Sony Asia
ဒါကြောင့်မလို့ Sony မိတ်ဆက်ထားလိုက်တဲ့ Xperia 1 II ၊ Xperia Pro နဲ့ Xperia 10 II ဖုန်းတွေက ဟက်ဟက်ပက်ပက် နည်းပညာမပါဘူးဆိုရင်တောင် လိုချင်စရာ ဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ ရောင်းချမယ့်စျေးနှုန်း မသိရသေးပေမယ့် Galaxy S20 စီးရီး ၊ OPPO FindX II ၊ HUAWEI P40 စီးရီးနဲ့ OnePlus 8 စီးရီးတွေနဲ့ ကောင်းကောင်း ရင်ဘောင်တန်းလာနိုင်မယ်။
၃ နှစ်လောက် မိုဘိုင်းကဏ္ဍမှာ ဆက်တိုက် အရှုံးပေါ်နေတဲ့ Sony ၊ 2020 မှာ မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Xperia ဖုန်းတွေနဲ့ တကျော့ပြန် Comeback လုပ်နိုင်မလား ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Source: The Verge ၊ GSMArena 1 ၊2၊ Sony Home Page ၊ Sony Asia
ကမ္ဘာ့အန္တာရယ်အရှိဆုံး Hacker ၁၀ ယောက်
realme X50 5G စီးရီးမှာ Pro နဲ့ဘာကွာလဲ? ရွေးချယ်သင့်တဲ့ Flagship ဖုန်းလို့ ပြောနိုင်လား?